TOPNEWS: RW Sharmaake oo Daaha ka rogay arrimo badan oo xasaasi ah | Barbaariyaha bulshada
TOPNEWS: RW Sharmaake oo Daaha ka rogay arrimo badan oo xasaasi ah
Sep 23, 2016 - jawaab
–Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo dadweyne kala qeybgalay Kulan lagu gor-feynayay Arrimaha Siyaasada oo su`aalo badan lagu weydiiyey ayaa ka jawaabay su`aalo la xariira arrimaha doorashooyinka dalka iyo doorka ay ku leeyihiin.
Mr, Sharmaake wuxuu iska fogeeyey in uu wax lug ah ku leeyahay amarada lagu caburinayo Saxaafadda & Siyaasiinta Musharaxiinta ah, wuxuuna sheegay in ay taasi tahay talaabo ku gaar ah cidii aan qabin kalsooni siyaasadeed.
Ra’iisulwasaaruhu wuxuu kaloo sheegay in loo siman yahay tabinta Warbaahinta, Banaanbaxyada, tartanka doorashada & Hantida Ummadda oo aan cidna ku gali Karin, wuxuu dhaliilay cid kasta oo kamid ah dawladda oo arrimahaas lug ku yeelato.
Lacagaha lagala baxay Bangiga Dhexe ayaa la weydiiyey wuxuu si cad u diidey ku lug lahaanshaha, isagoo sheegay in uu maqlayay wararka sheegaya in Lacag la dhacay, laakiin uusan u bogin qaabka ilaa hadda loo sheegayo iyo baaris la`aan aan lagu sameyn cidii ka dambeysay arrimahan.
Mar la weydiiyey sida ay ku dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah, wuxuu sheegay in ay Xukuumaddiisu diyaarisey wax kasta oo ay u arkayaan in ay doorashadaas ku noqon karto tii ay sugayeen Shacabka Soomaaliyeed, ayna jiraan dad Siyaasiin xildoon ah oo isku dayaya in ay dhinace u rogaan, balse wuxuu sheegay in aysan taasi socon doonin.